China iyo India oo maraakiib dagaal u soo diray Somaliya | Baydhabo Online
China iyo India oo maraakiib dagaal u soo diray Somaliya
Kadib markii ay sii kordheen falalka afduubka ah ee ay ku kacayaan Kooxaha Burcad badeeda Somalida ah, ayaa waxaa Maraakiib dagaal xeebaha Somaliya u soo diray wadamada China iyo Hindiya.Ugu yaraan saddex markab oo laga leeyahay labadaasi dal ayaa u soo dhaqaaqay dhanka Xeebaha Somaliya si ay isugu dayaan qorshe ay doonayaan oo ah inay soo furtaan doomaha ay gacanta ku hayaan Burcad badeeda Somalida.
Maraakiibta soo socota waxaa ka mid ah INS Tarkash iyo INS Mumbai oo ay leedahay Hindiya iyo Markabka PL Wadda ee China,waxaana ay doonayaan in ay hawlgal ka dhan ah Burcad Badeedda ka fuliyaan biyaha Somaliya si ay u furtaan dhawr Markab oo laga leeyahay Hindiya.
Hay’adda Ganacsiga Badaha UK ee UKMTO ayaa sheegtay in ay soo gaartay fariinta ah in shalay la qafaashay markab ka mid ah kuwa u diiwaan gashay islamarkaana ay shaqalaah u sheegeen in ay ku dhaceen gacanta Burcad Badeedda Somaliya.
Kiisaska Burcad badeeda Somalida ee dib kaga soo cusboonaday Somaliya ayaa Maraakiib badan oo dagaal oo dalal shisheeye laga leeyahay waxa ay u sahli doontaa inay mar marsiyo ka dhigtaan Burcad badeeda, kadibn ay gurtaan Kheyraadka Somaliya.
Muddo sanado ah waxaa laga raystay Burcad badeeda Somalida, balse abaabul ay sameeyeen ayeey dib uga soo cusboonaadeen Xeebaha Somaliya.
Saldhigyada Burcad badeeda Somalida ayaa waxa ay ku yaalaan deeganada Galmudug iyo Puntland oo hadda lagu haysto Maraakiib iyo Doomo ganacsi oo afduub ahaan loo haysto.